Ho fahatsiarovana ny mahery fo mpitandrina ao Kiobà
Kiobà ny fitomboan'ny fiangonana!
Olof Amkoff, ny havanana ny sary sy Donald Appelfeldt ho ankaviako. Pastor Thomas Scull hita amin'ny vadiny sy ny zanany Ruby: Sarah, Elizabeth sy Tomasi.
1998 nandrara ny fitondrana azy hanohy hanana "cultos", fanompoam-pivavahana, ka dia nitoetra tao am-ponja imbetsaka.
Tamin'ny dianay ho any Kiobà, dia nanam-potoana sy Kalle Appelfeldt tafatafa mpitandrina Fernando Leyva, talohan'ny nahafatesany herinandro taty aoriana. Izy mitsangana eo afovoan'ny tanana amin'ny Baiboly.
Kominista ka niady ianareo nitondra MPLA marksista mpiady anaty akata
Izy dia komonista, ary nino ny revolisiona Castro, ary nalefa tany Angola hiady ny MPLA marksista mpiady anaty akata lafiny an'i UNITA mpiady anaty akata nandritra ny ady an-trano izay nanomboka tamin'ny 1975.
Ary niady nandritra ny roa taona tany Angola ary mavitrika mpiandraikitra 10 taona. Ao amin 'ny 40.000 miaramila Kiobàna any Angola, 15.000 maty, ary rehefa nisy nilaza tamin'i Fernando fa tsy misy mpitondratena na fanampiana hafa nandoa ny nidonam-pahoriana, dia diso fanantenana toy izany ny fitondrana sy ny kominisma fa nitsahatra nino izy roa lahy.
Dia voavonjy amin'ny fandevenana
Raha ny havany ny 7 taona maty vavy tamin'ny 1990, dia nanatrika ny fandevenana, ary nisy olona nitory ny filazantsaran 'i Jesoa fa Izy no Fitsanganana amin'ny maty ary Fiainana. Avy eo dia voavonjy, sy ny vadiny iray volana taty aoriana.
Maro ny miaramila sy ny mpikambana ao amin'ny antoko no namonjena, na manamboninahitra ambony miaramila sy manam-pahefana, nefa vitsy sahy hivoaka ampahibemaso izany, satria dia Voaroaka.
Ny vehivavy mafana fo ny antoko izay manosika azy hanana nampidirina am-ponja ao amin'ny taona 1990, dia nihaona vao haingana, rehefa niaiky ny tenany ho Kristianina!
15 fiangonana evanjelika
Fernando fiofanana ho pasitera, ary nanorina ny fiangonana evanjelika tao an-tranony tanànan'i Bejucal amin'ny 25,000 mponina. Ary nisy ho fiangonana katolika sy ny fitondrana namana fiangonana batista, na panafahana teolojia. Misy fiangonana 15 any evanjelika.
Tany am-ponja i
Fa nihantsy ny fandrarana, ary nanohy ny fivoriana. Efa tanteraka namoy ny fahatahorany ny fitondrana, ary nanambara tamim-pahasahiana teo ny finoany an 'i Kristy "mandra-pahafatiny tamin'ny herinandro lasa.
Nahita Kiobà mifandimby
Vao haingana, dia nitondra ny lehibe ao amin'ny tafika mba hino. Dia hoy izy eo amin'ny tafa sy dinika niaraka taminy ny amin'ny "voninahitra mpitandrina Thomas Scull (ho amin'ny zon'ny Fernando) izay efa nahita Kiobà lasan'ny ny 70 taona ny fiainana tsy ho tanteraka ny tsy finoana an'Andriamanitra anjakan'ny, Marxism, Fivavahana Katolika, sy mivavaka amin'ny fanahy, fa izao maro mavitrika Pentekotista sy ny fiangonana evanjelika manodidina ny nosy, ho valin 'ny vavaka ataontsika sy ny faharetana. Efa tsy nivadika tamin'ny fahafatesana, na dia eo aza ny blacklisting sy ny zavatra hafa, fa ny nahatanterahan'Andriamanitra ny fampanantenana ho antsika! "
Next taona, ny fitondrana dia marihina fa 100 taona lasa izay, ny Pentekotista hetsika tonga tany Kiobà. Ho fahitalavitra hetsika ary efa namela ny fihaonambe nanorina ho fitoriana!
Vecka 49, torsdag 9 december 2021 kl. 13:53